Hisokatra ho an'ny mpitsangatsangana i Puerto Rico amin'ny 15 Jolay
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Puerto Rico » Hisokatra ho an'ny mpitsangatsangana i Puerto Rico amin'ny 15 Jolay
Governoran'i Puerto Rico Wanda Vázquez Garced
Araka ny nambaran'ny governoran'i Puerto Rico Wanda Vázquez Garced farany teo, manamarika ny fiandohan'ny 3 ireo tamin'ity herinandro ityrd dingana fanokafana ara-toekarena ho an'ny fahefana amerikana, miaraka amin'ny fialamboly sy fizahan-tany no lohalaharana. Nasongadin'ity fanambarana ity fa nasaina ny mponina eo an-toerana hankafy ny harena voajanahary sy kolontsaina be dia be avy hatrany, ary vonona ny handray tsara ireo mpandeha hatramin'ny 15 Jolay ny indostriath miaraka amina fari-pitsipika henjana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana mba hifehezana ny fiparitahan'ny Covid-19.
Misokatra ho an'ny mponina ao amin'ny Nosy ny toerana manintona sy toerana fizahan-tany malaza ankehitriny. Ireo dia afaka mankafy ny hatsarana voajanahary sy ny fandraisam-bahiny an'ny indostrian'ny dia miaraka amina fetra sasany. Ny trano fandraisam-bahiny manodidina an'i Puerto Rico dia nisokatra foana, ary miaraka amin'ity fanavaozana vao haingana ity, ireo toerana iraisana sy ara-barotra, toy ny dobo, fisotroana, trano fisakafoanana ary fivarotana ao anatin'ny trano fandraisam-bahiny dia afaka miasa amin'ny fahafaha-manana 50% mba hampiroboroboana ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ny fisarihana mpizahatany sy ny toerana malaza dia misokatra ihany koa mandritra io dingana io. Ireo mpandraharaha mpizahatany sy orinasa manofa fitaovana ampiasaina amin'ny hetsika mifandraika amin'ny traikefa fizahan-tany dia nahazo alalana hanohy ny asany ihany koa.
Ny dia mankany amin'ny fanarenana fizahan-tany dia natomboka 90 andro lasa izay, tamin'ny tapaky ny volana martsa, ny didim-pitondrana nataon'ny Governora dia nanidy ny fanidiana hidinam-pirenena. Puerto Rico no fahefana voalohany tany Etazonia nampihatra ny curfew hitantanana ny areti-mifindra COVID-19 ary hisorohana ny firodanan'ny rafitry ny fahasalaman'ny Nosy. Ny ezaky ny Governemantan'i Puerto Rico dia neken'ny besinimaro ho iray amin'ireo valinteny mahery setra indrindra tany Etazonia ary ny tahan'ny aretina sy fihenan'ny COVID-19 eto amin'ny Nosy dia mijanona ho anisan'ny ambany indrindra amin'ny firenena.
Mikendry ny hitandro hatrany ny fahasalamana sy ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika rehetra ny nosy. Ny orinasam-pizahan-tany any Puerto Rico (PRTC), ny minisiteran'ny fizahantany an'ny governemanta, dia namolavola sy nametraka fenitra henjana izay tsy maintsy arahin'ireo orinasam-pizahan-tany rehetra alohan'ny hanombohana ny asany. Miaraka amin'ny Programa momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny fizahantany navoaka tamin'ny 5 Meyth, Puerto Rico dia nanjary iray amin'ireo tanjona fitsangatsanganana voalohany namoaka torolàlana natao manokana hiarovana ny fenitra ara-pahasalamana sy fiarovana avo indrindra amin'ny orinasa fizahan-tany rehetra.
“Midika izany izahay rehefa milaza fa te hanana fenitra volamena amin'ny fahasalamana sy fiarovana. Ny orinasa mifandraika amin'ny fizahantany dia tokony hanaraka sy hampihatra ny torolàlana tafiditra amin'ity programa feno ity. Hizaha sy hanamarina trano fandraisam-bahiny sy mpandraharaha 350 mahery koa ny PRTC mandritra ny efa-bolana manaraka izay tsy maintsy manaraka ireo fenitra ireo. Azontsika antoka fa ny fiantohana sy fiarovana omen'ireto fepetra ireto, miampy ireo traikefa izay nahatonga an'i Puerto Rico ho toerana manintona toy izany, dia hanana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany ao amin'ny Nosy, "hoy ny talen'ny fahefana mpanatanteraka ny PRTC, Carla Campos.
Ny traikefa azo antoka dia manomboka amin'ny fizotran'ny fahatongavany. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Luis Muñoz Marín (SJU / LMM), seranam-piaramanidina lehibe ao amin'ny Nosy, iaraha-miasa amin'ny Puerto Rico National Guard, dia mampiasa teknolojia avo lenta hamoahana ny hafanan'ny mpizahatany tonga ho azy ary manana mpiasa eo an-toerana hitantana fizahana fahasalamana haingana ho an'ireo mpandeha tonga eto amin'ny Nosy. Ny fitsapana COVID-19 maimaim-poana sy maimaim-poana koa dia hita ao an-toerana. Nisokatra hatrany ny seranam-piaramanidina ary, tsy tahaka ny toerana itodiana any Karaiba rehetra, Puerto Rico tsy nanidy ny sisin-taniny. Amin'izao fotoana izao, Puerto Rico dia mitantana hetsika eo amin'ny 200 eo ho eo isan'isany izay ahitana sidina sidina, mpandeha ary sidina ankapobeny.
Ny Governemanta Puerto Rico koa dia miasa afa-tsy ny quarantine tsy maintsy atao mandritra ny 14 andro izay mitoetra ho manan-kery hatrany, ho an'ireo mpandeha tonga ny 15 Jolay na aorian'izany izay manome porofon'ny fitsapana COVID-19 ratsy. Ny antsipiriany misimisy kokoa satria mifandraika amin'ireo fepetra takiana ireo dia homena amin'ny andro ho avy satria efa vonona hiatrika fampiantranoana ireo mpizahatany i Puerto Rico.
Ny fanambarana ny famerenana indray ny hetsika fizahan-tany ho avy dia mamela an'i Discover Puerto Rico (DPR), ny fikambanana marketing any amin'ny Nosy (DMO), hanavao ny ezaka fampiroboroboana ataon'izy ireo. Ny talen'ny tompon'andraikitra ao amin'ny DPR, Brad Dean, dia naneho hevitra fa “ny fikarohana dia mampiseho fa efa mikasa ny vakansy manaraka izy ireo ary mitady amoron-dranomasina sy toerana ambanivohitra afaka miantoka traikefa azo antoka sy salama. Puerto Rico no safidy mety indrindra satria manambatra traikefa hafahafa miaraka amin'ny fampiononana sy ny fahazoana mankamin'ny toerana alehan'ny Etazonia tsy mila pasipaoro takiana. Ny Discover Puerto Rico dia niasa hitazomana an'i Puerto Rico ho eo an-tampon'ny sain'ny mpanjifa, ary manomboka amin'ny 15 Jolay dia ho azonay omena azy ireo ny fialan-tsasatra nofinofisin'izy ireo. ”
Carla Campos, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny PRTC, dia nilaza fa manantena fepetra vaovao sy malefaka kokoa izy izay hanome ny mpitsidika fidirana sy safidy bebe kokoa hankafy ny hatsarana voajanahary, ny manintona ary ny fampitaovana azon'ny Nosy omena azy mialoha na amin'ny 1 Jolay.st.
Tamin'ny kabary famaranana nataony dia nanentana ny mpandeha ny Governora Vázquez Garced mba handamina mialoha ny fialan-tsasatra hataon'izy ireo mialoha ary hanaraka ny fepetra rehetra napetraka mba hiarovana ny fahasalamana sy ny filaminan'ny tsirairay amin'ny zava-misy eran'izao tontolo izao noho ny areti-mandringana COVID-19.
Voatendry ny EVP vaovao momba ny Human Boeing Human Resources
IGLTA: Ny roa ampahatelon'ny mpandeha LGBTQ + manerantany dia handeha indray amin'ny 2020